यी गल्ती भुलेर पनि नगर्नुहोस जसले तपाईंकाे मष्तिस्कलाई असर गरिरहेकाे हुन्छ ! - ज्ञानविज्ञान
यी गल्ती भुलेर पनि नगर्नुहोस जसले तपाईंकाे मष्तिस्कलाई असर गरिरहेकाे हुन्छ !
एक दिनभरमा तपार्इँ अाफ्नाे दिमागलार्इ असर पर्ने कति गल्तीहरू गर्नुहुन्छ हाेला ? हुन त मानिसले जीवनमा धेरै गल्ती गर्छ। भनिन्छ गल्ती नगर्ने मानिस नै हुँदैन । गल्ती सामान्य मानिसले मात्र होइन बुद्धिमान तथा मेहेनती मानिसले पनि गर्छन् । तर तपार्इँका गल्तीले अाफ्नाे दिमागमा कतिकाे असर गरिरहेकाे छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।
तपार्इँलार्इ सामान्य लाग्ने अानीबानीले पनि तपार्इँकाे दिमागलार्इ असर पुर्याइरहेकाे हुन्छ । हामीले दिनभरीमा धेरै यस्ता गल्तिहरु गर्छाैँ जसको कारण हाम्रो दिमागमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा मेमोरी पावर कमजोर भएर मस्तिष्कमा असर पर्ने समस्या अाउनसक्छ ।
दिमागले सही तरिकाबाट काम गर्न सक्दैन । न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर प्रनव कुमार भन्छन् यदि यी गल्तिहरुलाई समयमा नै सुधार ल्याउन सकियो भने दिमागलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
दिमागलाई असर गर्ने हाम्रा ५ आनीबानीहरु यस्ता छन् ।
Topics #गल्ती #दिमागलाई असर #बुद्धिमान #मष्तिस्क #मष्तिस्कमा असर
Don't Miss it के खाने र के नखाने पत्थरी भएमा ? जान्नुहोस् पत्थरी सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी !
Up Next कतिकाे फाईदाजनक छन् त कालो दाग भएको केरा स्वास्थ्यका लागि ? पूरा पढ्नुहोस
सावधान ! यसकारण खस्छ महिलाकाे पाठेघर र यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ, जान्नुहाेस्
नेपाली महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु मध्ये पाठेघर झर्ने (खस्ने) ‘जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ’ एक मुख्य समस्या हो ।अहिले…
सावधान ! एलर्जी बनाउला नयाँ लुगा लगाउँदा होस गर्नुहोस्
नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं आउँदै छ । दशैंको विभिन्न विशेषता मध्ये एक हो नयाँ लुगा लगाउने । सानो उमेरका…
शरीरलाइ किन चाहिन्छ क्याल्सियम ? क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्नुहाेस्
आवश्यक मात्रामा क्याल्सियमको मात्रा नपुगेमा मानव शरीरमा त्यसका विभिन्न असर देखापर्न सक्छन् । आवश्यक मात्रामा क्याल्सियम नभएमा मानव शरीरमा हड्डीसम्बन्धी…
बच्चाको उचाइ बढाउने सजिलो तरिकाहरू यस्ता छन्, जान्नुहाेस्
बच्चा तथा बालबालिका अगाडि बढ्नुमा हरेक आमा बाबुले आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।उनीहरुको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक…
दुधमा बेसार मीसाएर खादा हुने फाइदाहरु |
१.दैनिकरुपमा एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाएर खाँदा प्रयाप्त मात्रामा क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ । जसका कारण गर्दा हड्डी स्वस्थ…
१. शरीरको वजन घटाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस र मह हालेर नियमित खाने गर्नुपर्छ । बिहान महपानी…
यस्ता छन् मैदा सेवनले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्या
मैदा अर्थात् रिफाइन्ड आँटा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खानयोग्य मानिँदैन । यदि तपाईं पनि दैनिक रुपमा मैदाबाट बनेका खानेकुरा सेवन गर्नुहुन्छ भने…
एक मिनेटमै चम्चाको माध्यमबाट थाहा पाउनु हुनेछ आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था
विधिः चम्चालाई आफ्नो जिव्रोको वरिपरि घुमाउनुहोस् । अब त्यो चम्चालाई एउटा सफा प्लाष्टिकको व्यागभित्र हाल्नुहोस् । त्यसलाई केही समयको लागि…
यी हुन् खतरनाक रोगहरु निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने
हामी आफैंले थाहा पाउन कठिन हुने भएकाले यो समस्या आफूसँग सुत्ने अर्को मानिसले थाहा पाउन सक्छ । निद्रामा घुर्नु, निदाएका…
कम उमेरमै स्मरणशक्ति त गुमाउनु हुदै छैन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ
स्मरणशक्तिको ठूलो महत्व छ मानव जीवनमा । त्यसो त मानिसहरुको जन्मजात स्मरण क्षमतामा खासै अन्तराल हुँदैन । करिव-करिव उस्तै हुने हो…
ग्यास्ट्राइटिस बाट बच्ने केहि सरल टिप्स
१. ग्यास बनाउने खाद्यपदार्थ नखानुस् ग्यास्ट्राइटिस समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, ग्यास बनाउने खालका खानेकुरा । केक, कार्बोनेटयुक्त सामग्री, अमिलो…